Uyilo loShishino-Xiamen Easo Co., Ltd.
Iqela lethu loyilo lweshishini eligqwesileyo kunye neqela lolawulo lwemveliso likhona ukuxhasa iimfuno zakho.
Isifundo seMarike:Ukuze uhlale phambili kwiindlela zemarike, iqela lokuthengisa le-EASO liqhuba ishishini rhoqo kunye nophando lwemarike ngokuhlalutya indawo, ukufundwa kwee-tradeshows, uphando lwe-intanethi kunye nengxelo yengxelo yoshishino njl. Lonke ulwazi lusetyenziswa kwisinyathelo ngasinye soyilo lwemveliso entsha.
Uyilo lweMveliso:Sigxininisa kwiiprojekthi ze-ODM/JDM eziqala kuphando lwemarike, ingcaciso emfutshane yoyilo, unikezelo lwe-ID, ukuqonda isazisi, uphuhliso lwemveliso ukuya kwimveliso eninzi kunye nokuthunyelwa kokugqibela.Injongo yethu kukubonelela abathengi bethu ngamnye ngeemveliso ezifanelekileyo kwiimarike.
Amabhaso okuYila:Sibonwa njenge "Fujian Provincial Industrial Design Centre" kunye nenkampani yethu engumzali i-Runner Group ihlonitshwa njenge "National Industrial Design Centre" esikwaziyo ukwabelana ngezixhobo zoyilo kumaqonga.
IFaucet yeshawa, Delta Shower, IiFaucets zeshawa yeDepo yasekhaya, IKholam yeshawari, Impompo yeshawari, Basin Faucet,